किन दिए प्रचण्डले कांग्रेसलाई एमालेलाई जस्तै ठेगान लगाउने चेतावनी ? - Open Khabar - नेपाली अनलाइन डिजिटल पत्रिका
काठमाडौं। वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पहिलो शक्ति बन्यो ।
७५२ स्थानीय तहको अन्तिम परिणाम आउँदा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार कांग्रेसले ३ सय २९ पालिकाको नेतृत्व जित हात पार्दा २०७४ को निर्वाचनमा पहिलो शक्ति बनेको नेकपा एमालेले २ सय ५ मा सीमित बनेको छ ।
माओवादी केन्द्रले १ सय २१ स्थानीय तहमा जित हात पर्दा जनता समाजवादी पार्टी ३०, एकीकृत समाजवादी २०, लोकतान्त्रिक समाजवादी १६ र अन्य पार्टी तथा स्वतन्त्रले ३१ पालिकामा प्रमुख पदमा जितेका छन् । २०७४ मा पहिलो शक्ति बनेको एमालेलाई यसपटक सत्ता गठबन्धनले कमजोर बनाइदिएको छ ।
सत्ता गठबन्धन गरेर उम्मेदवारी दिएको कतिपय स्थानीय तहमा एमाले एक्लै भारी बनेको छ । गठबन्धन गरेका कारण एमालेले कतिपय स्थानमा १ सय मत भन्दा कमले पराजय व्यहोरेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भाषामा भन्दा एमालेलाई माओवादीले कांग्रेससँग मिलेर ठेगानु लगाइदिएको छ ।
मत संख्याको आधारमा नेकपा एमालेले २०७४ को भन्दा बढाएको भए पनि नेतृत्वमा उसलाई घाटा लागेको छ । वैशाख ३० को निर्वाचनमा एक निर्वाचन क्षेत्रमा बाहेक एमालेले २ करोड ५८ लाख ७३ हजार ९१३ मत पाएको छ । २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा उसले २ करोड १४ लाख ५० हजार मत पाएको थियो ।
यस निर्वाचनमा तेस्रो बनेको माओवादीले २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा भन्दा यसपटक झण्डै १० लाख मत कम पाएको छ तर पदमा भने उसले जीत बढी हासिल गरेको छ । ०७४ को निर्वाचनमा कांग्रेसले २ सय ६६ स्थानीय तहमा प्रमुख जितेको थियो तर यसपटक उसले ३ सय २७ प्रमुखमा जितेको छ । गत निर्वाचनमा ३५ प्रतिशत जित हात पारेको कांग्रेसले यसपटक ४३ प्रतिशत पालिका जितेको छ ।
ठेगान लागेको एमाले ?
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीबाट निर्वाचित स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखको प्रशिक्षण कार्यक्रममा एमालेलाई आफूहरुले ठेगान लगाएको भन्दै गौरव गरे । निर्वाचनबाट ठूलो दल बनेसँगै कांग्रेसमा पनि अहंकार बढ्दै गएको भन्दै उनले एमालेलाई जस्तै ठेगान लगाउने चेतावनी उनले दिए । के प्रचण्डले भने जस्तै माओवादीले एमालेलाई ठेगान लगाएको हो तरु भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका कतिपय नेताहरु भने माओवादी लगायतका दलहरुसँगको गठबन्धनले गर्दा कांग्रेसलाई घाटा भएको बताइरहेका छन् । राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य पनि कांग्रेसले तालमेल नगरेको भए ४ सय स्थानमा कांग्रेसले एकल जित निकाल्न दाबी गर्छन् ।
तर परिणामहरुले भने गठबन्धनका दलहरु एक्ला एक्लै लडेको भए एमाले कमजोर नहुने देखिएको प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितका कांग्रेसका कतिपय नेताको विश्लेषण छ । यसरी एमाले ठेगान लगाउन कांग्रेस सफल भएको भए पनि यसमा उसको एकल स्वामित्व नहुने प्रचण्डको आशय छ ।
२०७४ मा १४ प्रतिशत पालिकामा जितेको माओवादीले यसपटक १६ प्रतिशत जित हात पारेको छ । तालमेलबाट ६८ पालिकामा जितेको माओवादीले एकल रुपमा ५३ पालिकामा जित हात पारेको छ । उता कांग्रेसले गठबन्धनको बलमा १२१ स्थानमा जित हात पारेको छ । बुधबारको प्रचण्डको भनाइ यसैप्रति लक्षित छ ।
नेपाली कांग्रेसले १२१ स्थानमा गठबन्धन गरेर जितेको छ जहाँ एक्ला एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेको भए अवस्था फरक हुने उनको विश्लेषण छ । पहिलो दल बनेसँगै कांग्रेसमा दम्भ पलाए एमालेकै हालत बनाइदिने उनको चेतावनी छ ।
‘कांग्रेसलाई माओवादीले बडो मिहिनेत गरेर प्रधानमन्त्री बनायो तर एमालेको जस्तो अहंकार गर्‍यो भने हामीले कांग्रेसलाई एमालेलाई जस्तै ठेगान लगाउन नपरोस्,’ प्रचण्डले भने, ‘कांग्रेस अहंकारी होला कि भन्ने चिन्ता छ ।’ माओवादीले कहिले एमाले त कहिले कांग्रेसलाई ठूलो पार्टी बनाइ दिएको भन्दै उनले दम्भ देखाउनेलाई आफूहरुले बिद्रोह गरेर देखाइदिने चेतावनी दिए ।
‘कहिले एमालेको दम्भ बढाइदिन्छ, कहिले कांग्रेसको दम्भ बढाइदिन्छ भन्ने आरोप माओवादीलाई छ,प्रचण्डले भने ,’त्यस्तो गरेको जस्तो पनि देखिन्छ । तर जसले दम्भ देखायो अह‌ंकार त्यसविरुद्ध मा‌ओवादीले विद्रोह गर्दै आएको छ ।’ उनले अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि एमालेको मन रोइरहेको भन्दै त्यस्तै अवस्था संघीय र प्रदेश निर्वाचन पछि कांग्रेसको हुनसक्ने सांकेतिक चेतावनी दिए ।
nepali newsnepali online newsकिन दिए प्रचण्डले कांग्रेसलाई एमालेलाई जस्तै ठेगान लगाउने चेतावनी ?नेपाली समाचारफिचर